SNL mere parody Prince ọhụrụ nke na -agba ọchịchịrị karịa nke mbụ - Pop Cult
SNL mere parody Prince ọhụrụ nke na -agba ọchịchịrị karịa nke mbụ
Vidiyo pụọ Ndụ abalị Satọde
Ihe kachasị ọhụrụ, ihe omume Jessica Chastain kwadoro Ndụ abalị Satọde kpebiri ịtụgharị otu n'ime ihe ngosi akara ngosi nke netwọkụ. Eserese eserese sitere na egwu isiokwu echefu echefu maka Ọhụrụ Prince Bel Bel. N'ebe a, ndụ Will mgbe 'obere ọgụ' a n'ụlọ ikpe basketball dị na Philadelphia na -atụgharị nke ukwuu.
Chris Redd onye otu egwuregwu akpọrọ, akụkọ Smith na -amalite otu ihe ahụ na mbụ. Ya na ụfọdụ ndị na-enyo enyo nọ n'ogige ahụ na-ese okwu na nne ya (nke Leslie Jones na-akpọ) kpebiri na ọ ga-aga Bel-Air ka ya na nwanne nna ya na nwanne nna ya biri. Agbanyeghị, n'oge a, Method Man na-edu ndị ohi Smith na-alụ ọgụ, na ha bụ n'ezie òtù ọjọọ nke ga-eso ya na Bel-Air gbuo ya.
gịnị ma ọ bụrụ na nhicha ahụ bụ n'ezie
Ha kụrụ hel nke Uncle Phil (nke KenanThompson na -egwuri egwu) wee mee ka Carlton tụọ uwe ogologo ọkpa ya kama ịkụ aka ịgba egwu mbinye aka ya. Ọ ga -ezo na họtel ebe ọ na -ezute onye ọrụ FBI (nke JessicaChastain na -egwuri egwu) onye na -enyere ya aka ịgha ụgha ọnwụ ya wee pụọ n'okporo ụzọ ka ọ ghara ịdị mma. Nke ahụ abụghịkwa akụkụ oke ọhịa.
Nke a ọhụrụ version nke Ọhụrụ Prince isiokwu bụ n'ezie ihe swive site na mbụ, mana ndị fan yiri ka ọ na -atọ ya ụtọ, ọkachasị cameo sitere na Method Man.
Ihe osise Fresh Prince a dị oke egwu #SNL pic.twitter.com/TiRj1pKrdd
kedu ka ọ dịruru 2 (2019)
- Kayleesi (@kayleeee) Jenụwarị 21, 2018
Method Man cameo n'oge eserese Fresh Prince #SNL mere abalị m
- Corbin Reiff (@CorbinReiff) Jenụwarị 21, 2018
Ezigbo okwu: ihe osise Fresh Prince of Bel-Air bụ. #SNL pic.twitter.com/a6HYZV8vG6
blac chyna na tyga na -etisa
- Cayce Lubrun (@caycelubrun) Jenụwarị 21, 2018
Ihe osise Fresh Prince ahụ bụ dope y'all. Ọ dị egwu! Ibe kachasị mma n'oge a. #SNL
- James Crampton (@JimCramptonWPG) Jenụwarị 21, 2018
na snl fresh prince skit na usoro mmadụ dị ka vinteji mad tv (otuto kachasị elu m nwere ike inye)
- Michael Sevigny (@Michael7E) Jenụwarị 21, 2018
Dịkarịa ala ugbu a enwere ntakịrị ntakịrị etu esi eme ya Ọhụrụ Prince ga -ama jijiji dị ka ihe nkiri mpụ. Lelee parody zuru oke na vidiyo dị n'elu.
obi ike nkịta ụjọ muriel nwụrụ
Ntụziaka achicha strawberry na -eji strawberries oyi kpọnwụrụ
ihe nkiri ọcha jaleel na ihe onyonyo
ihe na -abịa netflix na February 2019